Ukususela kwiiNdwendwe eziKhenketho ukuya kuVukani, Hlala konke ukufunda ngeCampus Tours
Ukuqulunqa isicelo esisebenzayo kwiikholeji ekhethiweyo okanye eyunivesithi, kufuneka ukwazi kakuhle isikolo. Ukutyelela i-campus yinxalenye ebalulekileyo yenkqubo. Xa wenza uninzi lwe-kholeji yakho yokutyelela , uya kufunda ukuba isikolo sinomdlalo ofanelekileyo, kwaye uya kufumana ulwazi oluxabisekileyo ngokubhala iincwadana zesicelo esithile esikolweni. Kwakhona, ukutyelela kwakho kuya kukubeka kwisofthiwe yokulandelela isicelo kunye nesikolo kwaye uncedo lubonisa ukuba umdla wakho esikolweni awukho ngaphezu kobunqwenelekayo.
Zibeke ngokwendlela yekholeji: uya kufuna ukuvuma abafundi abawenza isigqibo esinolwazi malunga neziko lakho kwaye batyalile ixesha kunye namandla ekukhetheni ukufaka isicelo kwisikolo sakho.
Iikholeji zihlala zijonge "ngabafakizicelo bezenzo" - abafake izicelo abangaqhagamshelana nesikolo de kube isicelo sifika. Abafaki zicelo banokuthi basebenzise nje ngenxa yokuba umzali ufuna, okanye kuba kulula ukufaka umbulelo kwizinto ezinjengeSicelo esisisicelo kunye ne- Free Cappex Application .
Ukutyelela i-campus yindlela enhle yokufunda ngakumbi ngekholejini, thintela ukuba ngumfaki sicelo, kwaye ubonise umdla wakho ngempumelelo. Ukufumana ukuba luhlobo luni lokutyelela iikholeji ezijoliswe kuzo, jonga iiwebhusayithi okanye ufikelele kumcebisi wakho wesikolo esiphakamileyo ukuze ufumane ulwazi olungakumbi malunga noko kunokufumaneka kwindawo yakho.
Ngezantsi ungafunda ngezinye iindlela zokutyelela ikholeji.
Uhambo lwekampus luyinxalenye ebalulekileyo kwinkqubo yokukhetha iikholeji. Steve Debenport / E + / Getty Izithombe
Iiholide zeCampus yindlela eqhelekileyo yokutyelela kwiikholeji, kwaye zibonelela ngezibonelelo ezininzi. Ngesinye, bahlala beqhutywa ngumfundi wangoku, ngoko uya kufumana umbono webafundi kwiikholeji. Kwakhona, banamathuba okubonelelwa ngeveki nangempelaveki, ngoko ke kulula ukuba bafumaneke kwiimyujelo ezixakekileyo zabafundi bezikolo eziphakamileyo.
Yenza uninzi lwenkokhelo yakho ngokubuza imibuzo yakho yokukhokela kwikhokelo eya kukunceda uqonde ikholeji engcono kwaye ingaba ilungele wena.
Lindela uhambo lwekampus ukuthatha iyure okanye ngaphezulu.
Iikholeji zeenkcukacha zeKholeji
Iseshoni yolwazi ingaba yindlela enkulu yokufunda ngakumbi malunga nekholeji. Iifoto zeHero / i-Getty Izithombe
Iiseshoni zeenkcukacha zeKholeji zivame ukuba zihlelekile ngakumbi kunezokhenketho zekampus, kwaye zinikezelwa rhoqo, rhoqo ngeMigqibelo kwaye ukhethe ngoLwesihlanu. Ukuya kubakho kwiqela elincinci ukuya kumawaka kubafundi kuxhomekeke kwisikolo nakwixesha lonyaka. Uninzi lweseshoni zolwazi luqhutywa lilungu labasebenzi abamkelekileyo, kodwa uya kudibana nezinye eziqhutywe ngabafundi, ootitshala, okanye ukudibana kwabasebenzi nabafundi.
Kwiseseshoni yolwazi, unokulindela ukufunda ngeenkalo zeenkcubeko zeekholeji kunye namathuba abanika abafundi, kwaye unokufumana iingcebiso zokusebenzisa ulwazi nolwazi lwezezimali. Kuza kubakho ixesha lemibuzo, kodwa kumaqela amakhulu umbuzo ovulekile unokuba ngumngeni.
Iiseshoni zeenkcukacha zeKholeji ziqhelekileyo kwiminyaka engama-60 ukuya kwimizuzu engama-90 ubude, kwaye uya kuba nethuba lokulala emva koko ukubuza abasebenzi nayiphi na imibuzo enokuthi unayo.
Ngokuqhelekileyo ngo-Agasti nokuwa, iikholeji ziza kubamkela iindwendwe ezivulekileyo zokuvulwa kwezindlu zabafundi abaza kubafundi. Ezi ziganeko zinokuba ngumngeni kubafundi bezikolo eziphakamileyo ukususela ekubeni zinikezelwa ngamaxesha ambalwa ngonyaka, kodwa kuyafaneleka ukwenza umzamo wokuya kuzo ukuba kunokwenzeka.
Iindlu ezivulekileyo zingaba yimini yesiganeko kwiziganeko zemihla ngemihla. Ngokuqhelekileyo baya kubandakanya iseshoni yolwazi jikelele kunye nohambo lwekampus, kodwa baya kubandakanya iziganeko ezifana nesidlo sasemini nabafundi kunye nobuchule, intlanganiso kunye noncedo lwezemali, iintlanganiso zemfundo kunye neentsebenzo, iindwendwe ezithile zeprogram kunye neziganeko, kunye neepaneli ezigxilwe ngabafundi kunye neengxoxo.
Ngenxa yokuba indlu evulekileyo ikunika iindlela ezininzi zokufumana ulwazi kunye nokusebenzisana nabasebenzi, abafundi kunye nobuchule, mhlawumbi uza kuhamba nenqondo engcono yekholeji kunokuba ungayilandela ityelelo okanye ifeshoni yolwazi.
Ngentwasahlobo, iikholeji ziya kubamba iintlobo ezifanayo zezindlu ezivulekileyo kuphela kubafundi abaye bamkelwa. Ezi zindlu ezivulekileyo zixhobo ezifanelekileyo kakhulu zokukunceda ukhethe ikholeji oya kuyo.
Ukutyelela kwekampus yobusuku kukuyona ndlela efanelekileyo kakhulu yokufumana ikholeji. Iifoto ze-Blend - I-Hill Street Studios / I-Brand X Izithombe / Getty Izithombe
Ukutyelela ngokukhawuleza kwinqanaba le-golide ye-campus, kuba akukho ndlela engcono yokufumana iikholeji kunye nenkcubeko yayo. Ukuba kunokwenzeka, kufuneka wenze enye ngaphambi kokuba wenze ukhetho lwakho lokugqibela kwikholeji.
Ngethuba lokutyelela ebusuku, uya kudla kwihholo lokudlela, ulale ehholo lokuhlala, u tyelele eklasini okanye ezimbini, udibanise nabafundi abangakhange bahlawulwe ukuze bavakalise kakuhle. Umncedisi wakho uza kukhethwa ngabasebenzi abamkelekileyo njengommeli okhuthazayo kunye neentlekele kwiikholeji, kodwa abanye abantu oya kuhlangana nabo ngexesha lokuhlala kwakho abayi kuba.
Kwiikholeji ezikhethileyo, ukutyelela ngokukhawuleza kubakho ukhetho kuphela emva kokuba ungeniswe. Izikolo eziphezulu azikwazi ukuba nezibonelelo ezaneleyo zokufumana izicelo ezivela kubafundi bamawaka, eninzi zazo aziyi kuvunywa. Kwiziko elincinane lokukhetha, ukuhlala ubusuku kungase kube yinto ekhethwa kuyo nayiphi na ingqinamba kumjikelezo wokwamkelwa.
Uhambo lwebhasi yekholeji lungaba yindlela efanelekileyo neyoqoqosho ukutyelela iikampus. Hinterhaus Productions / DigitalVision / Getty Izithombe
Uhambo lwebhasi aluyi kuba lukhetho kubo bonke abafundi besikolo esiphakamileyo, kuba bahlala beqhelekile kwiindawo ezinabantu abaninzi. Ukuba unalo ithuba lokutyelela ibhasi, ingaba yindlela enhle yokutyelela isikolo okanye izikolo ezininzi.
Iindwendwe zebhasi zinokuthatha iindidi ezininzi: ngezinye iikholeji zihlawulela ibhasi kubafundi abanomdla abavela kwindawo ethile; maxa wambi isikolo esiphakamileyo okanye inkampani yabucala iququzelela uhambo lwee-campuses ezininzi; maxa wambi iikholeji eziliqela ziza kubandakanya izixhobo zokuzisa abafundi kwindawo yokuvakashela iikampus zabo. Izikolo ezineendawo ezingaphandle kweendawo ziyakwazi ukuphakamisa ityeksi yebhasi njengendlela yokufumana abafundi abaphumelelayo kwiikampus zabo.
Uhambo lweebhasi lunokuzonwabisa noloncedo loluntu, kwaye lunokuba yindlela yokonga ukutyelela iikholeji. Abanye baya kukhululeka (bahlawulelwe iikholeji), kwaye abanye baya kuba bengabizi kangangoko kunokuba ukuba ufanele uqhube kunye nokuphatha amalungiselelo akho yokuhlala. Baye benza ulungelelwano lwakho uhambo lula, kuba abacwangcisi bezohambo baya kulungelelanisa iikholeji zee campus kunye neeseshoni zolwazi.
I-kholeji iyiluncedo ekuqokeleleleni ulwazi malunga neekholeji ezininzi. COD Newsroom / Flickr / CC BY 2.0
Iikhoreji zekholeji zigcinwe ngokuqhelekileyo kwisikolo esiphakamileyo okanye kwenye indawo enkulu yoluntu. Nangona akukho zikolo ezilungileyo esikolweni sakho, unokufumana enye kwindawo yakho. Ikholeji yekholeji ikunika indlela yokuqokelela ulwazi malunga neekholeji ezininzi, kwaye uya kuba nethuba lokuthetha nommeli ovela kwizikolo onomdla kuwe. Ziyakwenza isinyathelo esihle sokuqala kwinkqubo yakho yokukhangela kwiikholeji, nangona uya kufuna ukulandela ngokukhenketha kwee-campus kwizo zikolo ocinga ukuba unomdlalo ofanelekileyo kuwe.
Musa ukunyusa kwiikholeji zekholejini uze ulungele ukuthabatha iincwadana. Thetha kubameli kwaye ufumane igama lakho kwizintlu zeposi kwizo zikolo ozithandayo. Oku kuya kufumana kwiziko lekhompyutheni kwiofisi yokuvuma, kwaye kuya kubonisa ukuba uqhagamshelane nommeli wesikolo ngaphambi kokufaka isicelo.
Ukuvakasha kwiKholeji kwiSikolo sakho esiphakeme
Ngamanye amaxesha ummeli weekholeji uza kutyelela esikolweni sakho esiphakeme. Iifoto ze-Blend - I-Hill Street Studios / I-Brand X Izithombe / Getty Izithombe
Iiofisi zeekholeji zokungeniswa kweekholeji zinomkhosi omncinci wabacebisi abasebenzisa ukuwa kweendlela ezihambela izikolo eziphakamileyo. Umcebisi ngamnye unikwe ummandla othile wendawo kunye nenjongo yokufikelela kubafundi abaza kuleyo ndawo.
Xa ummeli wekholeji a tyelela isikolo sakho, olo tyelelo lunokuthatha iifom ezahlukeneyo. Ezinye izikolo ziphethe i-assembly evulekile kubo bonke abafundi. Ngokuphindaphindiweyo, ummeli uya kuba kwindawo ethile njengegumbi leenkomfa okanye ithala leencwadi, kwaye abafundi abanomdla bangahamba bedibana nomcebisi owamkelwayo ngexesha lesidlo okanye ihholo lokufunda.
Zisebenzise ezi zihlandlo xa zenzeka. Abacebisi beekholeji banomdla ukuthetha nawe (yingako balapho, emva koko konke), kwaye le yindlela enye yokufunda ngokubanzi ngesikolo uze ufumane igama lakho kwisipopu sokuqasha esikolweni. Ukuba unokwakha ulwalamano nomqashi wakho wendawo, loo mntu unokuya kukubetha xa izigqibo ezenziwe ngokumiselwa.
Igama lokugqibela kwii-Campus Visits
Qiniseka ukuba uhambe ukusuka kwikhenyu yakho yokuvakatyela ngolwazi oluninzi ngangokunokwenzeka. I-Hill Street Studios / Tobin Rogers / iifotshane / i-Getty Izithombe
Ingaba udibana nomcebisi esikolweni sakho esiphakeme okanye uhlale ubusuku obukholeji, qiniseka ukuba uhamba nokuqonda okungcono kwesi sikolo, kwaye usebenze ukwenza uxhulumaniso oluhle kunye noluntu. Ukubandakanyeka kwakho nesikolo kubalulekile kwiikholeji ezininzi, kwaye ukutyelela i-campus kunye neentlanganiso nabasebenzi abathunyelweyo ngabanye beendlela ezingcono zokubonisa umdla . Ukwakha ubudlelwane kunye nommeli wekholeji kunye nokubeka umgudu wokuba ukwazi kakuhle isikolo esikwaziyo kukudlala
Nangona le ngongoma ingaba yinto ecacileyo, ixesha elide ochithayo kwi-campus, bhetele ukuqonda kwakho kwikholeji kuya kuba. Yingakho izindlu ezivulekileyo kunye nokutyelela ebusuku zizona zixhobo ezisemgangathweni zokuqikelela ukuba ikholeji ngumdlalo ofanelekileyo kumdla kunye nobuntu bakho.
I-Kennes State State University GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Inkwenkwezi yeNkwenkwezi yeGlosari: iMfazwe yaseYavin
Yintoni eyahlukileyo phakathi kwezulu kunye neMozulu
UBenoit Usapho Lwabanye Ubulali-Ukuzibulala
Ubukhosi baseGupta: iGood Golden Age
Inyama entsha kunye neentlanzi
4 Ulwahlulo lweeMidlalo eziLahlayo ezikhutshwe iminyaka eyi-15 + Emva koMvelaphi
Abantu baseNormans - iViking yaseNormandy eFransi naseNgilandi
Imiyalelo yokulanda nokufaka i-Visual C ++ ye-2008 Express Edition
Yintoni ebalulekileyo yeeNyanga ezi-10 zokuqala zikaDhul Hijjah?
Indlela yokudibanisa "Nourrir" (Ukutya) ngesiFrentshi